25 Common Windows 10 Nsogbu na Olee idozi | Caseguru
25 Common Windows 10 Nsogbu na Olee idozi Ihe site : Jay Ali Jay Ali
August 3rd, 2015 Hapụ ikwu
Newz, Atụmatụ na Nkuzi, Nkuzi
Windows 10 dị ugbu a ebe ọ bụ na ụbọchị ole na ole ugbu a niile na ọtụtụ ndị ọrụ na-ama akuko ọtụtụ nsogbu na nwụnye, ụda, nche wdg. Nke a na-post ga-ekwu banyere Windows 10 nsogbu na-esi idozi ha.
Nke a bụ ihe nke a prelude, ma ọ bụ mkpa ịma ma ọ bụrụ na ị chọrọ iji gbochie enweghị isi mbipụta n'elu echichi. Kọmputa gị kwesịrị ịbụ ruo par na ụfọdụ ụkpụrụ. Ebe a bụ ụdịdị Microsoft na-achọ:
A processor nke 1 gigahertz (GHz) ma ọ bụ ngwa ngwa
1 gigabyte (GB) (32-bit) ma ọ bụ 2 GB (64-bit) Ram
16 GB nke free diski ike ohere
Microsoft DirectX 9 ndịna ngwaọrụ WDDM ọkwọ ụgbọala
A akaụntụ Microsoft ma Internet ohere
#2 Windows 10 agaghị download
Windows 10 agaghị download
Ọrụ ndị nwere Windows 7, 8 ma ọ bụ 8.1 na-kwesŽrŽ-enwe ike ibudata Windows 10 na-akpaghị aka site na ịpị mmegolite akara ngosi na usoro tree na taskbar. Otú ọ dị, ụfọdụ ndị ọrụ nwere ike na download, ma ọ bụ na e nyere ikike ibudata ya ma (Microsoft na-inyefe si upgrades nwayọọ nwayọọ otú ahụ Internet emebighị).
Na ọtụtụ ikpe, nsogbu ahụ na-okosobode n'ihi gị ugbu a mbipụta nke Windows bụ n'ụzọ zuru ezu emelitere, na-agba ọsọ Windows Update solves nsogbu.
Kwesịrị na-ada, i nwere ike na-arụ ọrụ na gburugburu nsogbu by using Microsoft’s Windows 10 media download ngwá ọrụ. Ọ ga-download a .ISO faịlụ nke sistemụ, nke nwere ike n'elu a USB mbanye ma ọ bụ a DVD mgbe ahụ na wụnye sistemụ site ọkọ.
#3 Windows 10 Ebighị mbipụta
Windows 10 Ebighị mbipụta
Ịbụ ihe kasị isi nsogbu na ọrụ na-akuko na mmalite ụbọchị nke Windows 10 bụ a ihe isi ike na rụọ ọrụ software ozugbo ọ awụnyere. Ọ bụ ike iche n'echiche a ọzọ isi nke karịa nke a, na ndammana a emewo ka ụfọdụ kama testy Ibọrọ na Internet forums n'elu ikpeazụ ụbọchị ma ọ bụ otú.
Otú ọ dị, na-akụda mmụọ bụ ezie na ebighị mbipụta doro anya na na-, na ihe banyere Windows 10 ọ bụ omume na-edozi ha dịtụ painlessly. N'ezie, Microsoft ka n'ihu ọha kwuru na ihe ọ bụla metụtara ebighị kwesịrị N'eziokwu dozie onwe ha n'ime nkeji ole na ole. Nke a n'ozuzu a kọrọ na-ikpe n'etiti Windows 10 obodo, ma ụfọdụ ọrụ nwere sina ahụmahụ na-adịgide adịgide isi ike. A ga-enwe mgbe nile anomalies na a software ntọhapụ nke a complexity, ezie, na doro anya na ihe amamihe na-aga n'ihi na ndị na-enwe nsogbu a bụ nanị iji wụnye na-agbalị ọzọ.
#4 Windows 10 Akpaka mmelite
Windows 10 Akpaka mmelite
A ọtụtụ ndị na-ekwu na nchegbu banyere Microsoft ọhụrụ melite iwu. Mmelite Windows 10 na-amanyere bụ iwu, otú i nwere ike ghara pụọ ​​na nbudata na wụnye ha. Nke ahụ kwesịrị pụtara na ị nwere ike software na ọhụrụ nche patches na fixes, ma mgbe ụfọdụ, ọ na-aga-eme ka nsogbu. Anyị na-ama hụrụ glitches na mkpọka mere site a esemokwu n'etiti Windows Update na Nvidia si ọhụrụ ọkwọ ụgbọala, ọ bụ ezie na nke na-swiftly ofu. The iberibe ahụhụ na-ezopụ site Microsoft ule bụ apụghị izere ezere.
Ọ bụrụ na ị gaba na a Microsoft na-akwado na peeji nke ị ga-ahụ ntụziaka maka iwepu onye na-achọghị ọkwọ ụgbọala ma ọ bụ melite. Ị ga-ahụ "Gosi ma ọ bụ zoo mmelite" ngwaọrụ ngwugwu. Download ya, emeghe ya elu, mgbata Zoo mmelite, na mgbe ahụ ịlele mmelite ị na-achọghị iji wụnye na-akpaghị aka. Ị nwere ike ịlaghachi ya mgbe e mesịrị na enweta Gosi zoro ezo mmelite na mgbe ahụ uncheck ihe ọ bụla ị kpebiri na ị chọrọ iji wụnye mgbe niile.
I nwere ike iji a firewall igbochi update ọrụ na gbochie ya emelite na-akpaghị aka. Nsogbu na nke a bụ na Microsoft nwere iwu nke igbupụ ohere n'ọdịnihu mmelite ma ị na-anabata mmelite na-abịa site n'ime otu ọnwa. Access ga-eweghachi ma ọ bụrụ na ị na-mgbe e mesịrị na-anabata mmelite ị na-igbochi, n'ihi ya, ọ ka nwere ike ịbụ ụzọ nke ịzụ oge ụfọdụ ịchọpụta otú ike melite bụ.
#5 Windows 10 Sound nsogbu
Windows 10 Sound nsogbu
If you have problems with the installation of a Realtek driver, adịghị na-zuru ọdịyo ahụmahụ na site HD Audio, ma ọ bụ nwere mbipụta na Conexant ọdịyo, e nwere ihe a workaround n'ihi na ị na-agbalị.
Ka a lee anya na atọ ndị a mbipụta na agbara iji. A nsogbu na Conexant ọdịyo pụtara na i nwere ike ịnụ ọ ụda na Windows 10 ọ bụ ezie na ihe nile na-egosi na-na-arụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi. Ezie na nke a na-nyochaworo, Microsoft na-atụ aro na-agba ọsọ msconfig.exe na-aga buut taabụ. Pịa Advanced nhọrọ button, ịlele Oke ebe nchekwa igbe na ịtọ uru 3072.
Ọ bụrụ na ị nwere site HD Audio na-ahụ na i nwere ike ịnụ nanị ụda ụfọdụ ngwa, e nwere ihe a dị iche iche workaround maka gị. Open n'ụdị Devices, nri pịa ọdịyo mmepụta ngwaọrụ do ya dị ka ndabere ngwaọrụ. Na eme nke a, họrọ ngwaọrụ, hit Properties, ịkwaga nkwalite tab na-elele Gbanyụọ niile nkwalite nhọrọ.
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ị na-enwe a mfịna Realtek ọdịyo ọkwọ ụgbọala echichi — kpọmkwem a 0x000005b4 njehie — i nwere ike na-agbalị a workaround bipụtara na Nkume Nkwado Library. E nwere ihe a na ndu iji Group N'uba Editor-enye onye na-akwọ aba iji wụnye, ma ọ bụ i nwere ike ibudata a ndekọ faịlụ na-etinye ọhụrụ ntọala ke ebe a di na nwunye nke clicks. Ozugbo a ka e mere, ị nwere ike ahụ re-agbali ọkwọ ụgbọala echichi.
#6 Windows 10 amanye mmelite akpata usoro okuku
Nsogbu ọzọ mere site amanye mmelite bụ na ha nwere ike okuku kọmputa gị.
Ịgbanyụ kọmputa gị kwesịrị idozi na a ikpe site ikpe ndabere. Ị nwekwara ike iwepụ ọkwọ ụgbọala ahụ na-akpata nsogbu.
#7 Windows 10 Chrome mbipụta
Windows 10 Chrome mbipụta
Ọtụtụ ọrụ na-akuko n'isi nsogbu na Chrome nchọgharị. Ọ bụ ezie na Microsoft ka nwara repackage ya nchọgharị Ịntanetị mgbalị na ntọhapụ nke ndị Edge nchọgharị, nke a bụ ka doro anya na ọjọọ ozi ọma n'ihi ọrụ nke ụlọ ọrụ. Chrome nweela a otutu ewu ewu na hardcore Internet ọrụ, ndị a bụ kpọmkwem ụdị ndị na-ndammana o nwere inwe n'isi ụtụtụ adopters nke Windows sistemụ.
N'ụzọ dị mwute, ọtụtụ Chrome nchọgharị ọrụ na-enwe a dum rafti nke nsogbu, na bogging na slowdowns nke software atụle karịsịa juru. O yiri ka ụfọdụ downloaders nke Chrome nchọgharị, processor-kpụ ọkụ n'ọnụ aga-eme otú ahụ dị ka nkwanye video na-anaghị arụ ọrụ, dị ka ha kwesịrị.
A ga-abụ otu ihe iseokwu na Microsoft na-arụ ọrụ karịrị oge, ma n'oge workaround maka ihe ọ bụla Chrome mbipụta nwetara bụ gbuo ihe niile extensions metụtara nchọgharị. Dị ka na nsogbu nile metụtara Windows 10, aro nke iwepu na reinstalling Chrome Umuihe a ma ama onye, na a mfe Usoro ahụ nwere ike inyere belata ọ bụla isi ike.
#8 Windows 10 amanye mmelite ka software clashes
Windows 10 amanye mmelite ka software clashes
The amanye mmelite nnọọ trickiest akụkụ nke Windows 10. Ma nsogbu ọzọ na nwere ike ime bụ mgbe a Windows update na-ekwekọ n'àgwà a na nke atọ ọkwọ ụgbọala management software update. Nke a nwere ike ime ka a okuku. Nke atọ ọzọ software nwere ike gbochiri, ma Windows update ike.
Gị mma nzọ bụ uninstall ọzọ ọkwọ ụgbọala management na ikwe ka Windows na-elekọta ihe niile usoro mmelite, nke na-enye Microsoft ike ọzọ ụlọ ọrụ na ngwaahịa.
#9 Windows 10 Agbahapụ ọkacha mmasị
Windows 10 Agbahapụ ọkacha mmasị
Internet Explorer abụwo otu n'ime ndị kasị ekwujọ iberibe software na ụwa, na Microsoft bụ mara mma nke ukwuu ọrụ-agbụ imelite ya mee elu mee kama e mesịrị. Ọ bụ ihe ijuanya mgbe ahụ na ọ wepụtara ọhụrụ Edge nchọgharị, na n'isi nzaghachi omume a bụ na ọ na-budata mma n'elu ya Internet Explorer ụzọ.
Otú ọ dị, ụfọdụ ndị ọrụ enwewo nsogbu ịchọta ha ndepụta nke ọkacha mmasị, nke na-azọrọ na na-kwagara n'elu kpọmkwem site ẹdude Internet Explorer ibe edokọbara. Otú ọ dị, na ọtụtụ ikpe na nke a bụ nanị ihe njirimara nke. Iji chọta ọkacha mmasị na Edge, ọ bụ nanị na ọ dị mkpa na-emeghe menu wee pịa 'Ntọala'. Pịgharịa ala 'Bubata ọkacha mmasị’ si ọzọ nchọgharị, họrọ nchọgharị na tinye n'ọrụ mbụ, na akpatre pịa 'Bubata'. Nke a kwesịrị dozie nsogbu n'otu ntabi.
#10 Windows 10 Cortana adịghị arụ ọrụ
Windows 10 Cortana adịghị arụ ọrụ
Ụfọdụ Windows 10 ọrụ e nwere nsogbu na-Cortana na-arụ ọrụ. Ụfọdụ ndị na-na-na-ozi na Cortana adịghị na ha ógbè ma ọ bụ asụsụ, n'agbanyeghị na a na-akwado na mpaghara na-eji a na-akwado asụsụ. Ndị ọzọ hụrụ Cortana abụghị na ndabara, ma ọ bụ na-arụ ọrụ kwesịrị ekwesị.
Na mbụ, kụrụ Malite > Cortana > Ji ede ma ị nwere ike toggle Cortana na gbanyụọ.
Were a anya na Ntọala > Oge & asụsụ. Mkpa ka ị na-ahụ na ị na-eji otu n'ime asụsụ ndị a na - Chinese (Simplified), English (U.K.), English (Amerịka), French, Italian, German, na Spanish, na na gị na Okwu asụsụ mkpọ arụnyere. Ị nwekwara mkpa gị mba ma ọ bụ mpaghara na-China, France, Germany, Italy, Spain, United Kingdom, ma ọ bụ United States.
#11 Windows 10 OneDrive placeholders arahụ
Windows 10 OneDrive placeholders arahụ
Microsoft gbanwere n'ụzọ na ígwé ojii nkwado ndabere ozi, OneDrive, na-arụ ọrụ Windows 10. A ọtụtụ ndị na-iwe ka na-ahụ na placeholders, nke e nwere ihu ọma gosi nke onye faịlụ echekwara na ígwé ojii, e wepụrụ. Ostensibly, nke a mere n'ihi na ụfọdụ ndị na-mgbagwoju anya site placeholders na echiche faịlụ e echekwara na mpaghara. Usoro ugbu a dabeere na a nhọrọ mmekọrịta, nke na-adịghị mma, ụfọdụ ndị onye mmasị na-enwe ike mmekọrịta onye faịlụ, karịsịa mgbe na-arụ ọrụ na ngwaọrụ ndị na-enwechaghị ohere nchekwa.
Na-aga site na ihe nchọgharị weebụ na-ahụ onye faịlụ na ị chọrọ.
I nwere ike see ya n'akwụkwọ dị ka a mbanye ke nchọgharị faịlụ. Abanye na OneDrive na ihe nchọgharị gị na pịa Files mgbe ahụ detuo CID nọmba (ọ ga-asị CID = sochiri a ọnụ ọgụgụ na adreesị mmanya). N'ihi na nke a atụ ka na-ekwu ọ na-ekwu CID = 435rty. Open File Explorer, na-aga Nke a PC, na pịa Map netwọk mbanye, họrọ a akwụkwọ ozi wee mado ke "https://d.docs.live.net/435rty". Ebe 435rty bụ gị akwụkwọ CID nọmba. Reconnect na ihe ịrịba ama na- ga-enyocha. Ị ga-mkpa banye, ma mgbe ahụ, ị ​​ga-enwe ike iji nweta gị OneDrive site File Explorer, ma na-dọrọ aka ná ntị - na ọ bụ a bit ngwa ngwa.
Cheta : This is still a work in progress, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka ị na-, agwa ndị na OneDrive otu banyere ya. Ị pụrụ ime ka aro na OneDrive website. Ha wee mee ka placeholders ma ọ bụ ụfọdụ ọzọ azụ na a ga-eme n'ọdịnihu update.
windo 10 nchekwa ada
Ụfọdụ mmalite Windows 10 ọrụ na-atụ aro na Windows 8 bụ ka ọhụrụ sistemụ na otu banyere. The email ngwa na e esịne ke Windows 10 adịghị ugbu a ekwe ka ndị ọrụ ike subfolders mgbe ahazi ẹdude email. Ezie na nke a nwere ike na-atụle ihe nke a na-adịchaghị mkpa nke ọtụtụ ọrụ, e nwere ugbu a na-nweghị ngwọta mkpesa a.
#13 Windows 10 Mail nke
Ọtụtụ ndị na-na-na na previewed Windows 10 na-ekwu na Windows Mail dị na version 8.1 dị elu karịa. Nke a bụ n'ihi na ị pụrụ ike nchekwa na subfolders, nke ị nwere ike ime na Mail ngwa na Windows 10 (dịkarịa ala dị ka nke ugbu a). Ndị chọrọ ime ihe email nhazi na-eji Thunderbird kama, nke na-arụ ọrụ nke ọma na Windows 10.
#14 Windows 10 ngafe bandwit oriri nke
Windows 10 ngafe bandwit oriri nke
Na Windows 10 Update nzipu Optimisation atụmatụ na-nyeere ndabara. Ihe bụ nsogbu bụ na a na arụmọrụ na-akpaghị aka na-eji usu kọmputa na internet bandwit n'ime na-ekesa mmelite ọzọ Windows 10 PC ọrụ
Windows 10 ọrụ nwere ike ịhọrọ aka-atụgharị-apụ atụmatụ, si otú retaining ịrịba bandwit maka mkpa na-eme. Iji deactivate Windows Update nzipu Optimisation, na-eso nzọụkwụ n'okpuru:
Nzọụkwụ 1: Open Ntọala
Nzọụkwụ 2: Ịnyagharịa ka Windows Update ngalaba
Nzọụkwụ 3: Họrọ Advanced
Nzọụkwụ 4: Họrọ Họrọ otú mmelite-anapụta nhọrọ
Nzọụkwụ 5: Nịm toggle ka Gbanyụọ
Mgbe ị na wụnye Windows 10, ọrụ kwesịrị achọpụta na Get mmelite si Microsoft, ma na-mmelite si na-eziga mmelite e debere ndabara na-PC na m na mpaghara na netwọk, na PC na internet.
Microsoft emewo kwuru na Windows Update nzipu Customisation atụmatụ ga-bụchaghị jiri-ala a usu PC si internet njikọ, ma ga-eji na ole bandwit.
#15 Windows 10 Njikọta mbipụta
Windows 10 Njikọta mbipụta
Ụfọdụ Windows 10 ọrụ na-na-na-eme mkpesa na Wi-Fi na-ịcha si na a mgbe niile. Nke a abụghị ihe ọhụrụ na ihe ọ bụla na-arụ ọrụ ma ọ bụ usoro igwe, ma ọ bụrụ ndị Windows 10 na e nwere nsogbu na reconnection. Nke a bụ n'ezie a karịsịa na-adịghị ahụkebe nke gafee multiple nsụgharị nke Windows, na gwara ya chọrọ nanị a dị mfe reboot. Nke a bụ mbụ ihe nke na Windows 7 na Windows 8, na ihe a ga-kpebiri pụtara n'ụzọ kwụ ọtọ mbiet.
Ọ bụkwa na a na-atụ aro ụfọdụ n'oge adopters nke Windows 10 na ajọ nkwarụ Wi-Fi nkekọrịta enyere wireless Njikọta na-budata ọzọ ike. Nke a workaround bụghị e eze kwetakwara na ego site Microsoft, ma ọ bụrụ na Wi-Fi na-egosi na-abụ nke ahụ gwụ ikere òkè Windows 10 nwere ike ịbụ a na-adịghị adịte fix.
#16 Windows 10 Wi-Fi na-ejighị n'aka, ngwa ngwa, ọ bụ ga-jikọọ
Windows 10 Wi-Fi na-ejighị n'aka, ngwa ngwa, ọ bụ ga-jikọọ
A otutu Windows 10 ọrụ na-akuko okwu na Wi-Fi. N'ihi na ụfọdụ ndị na ọ bụ ngwa ngwa ma ọ bụ intermittently tụlee njikọ, ndị ọzọ na-enwe nsogbu na-Wi-Fi na-arụ ọrụ mgbe nile.
Malite site mbịne gị rawụta na kọmputa gị anya na ọzọ.
Ọ bụrụ na ị nwere ike ghara inwe Wi-Fi na-arụ ọrụ mgbe nile mgbe ahụ, ị ​​nwere ike a ọkwọ ụgbọala nsogbu. Lelee na netwọk gị nkwụnye emeputa na-eme ka n'aka na i nwere ndị ọhụrụ ọkwọ ụgbọala. Ị nwere ike ibudata ya na kọmputa ma wụnye ya site na eriri flash mbanye.
Jide n'aka na gị rawụta nwekwara ndị ọhụrụ femụwe. Ị ga-ahụ na ọ na emeputa website.
Gaa Ntọala > Network & Internet > Wi-Fi. Jide n'aka na Jikọọ na-akpaghị aka igbe na-enyocha maka netwọk na ị chọrọ jikọọ.
Gaa Ntọala > Network & Internet > Wi-Fi > Jikwaa Wi-Fi ntọala > Jikwaa mara na netwọk ma họrọ netwọk gị, wee pịa Echefu. Reboot igwe na-abanye na netwọk nkọwa jikọọ ọhụrụ.
#17 Windows 10 -amasị gị na Wi-Fi na kọntaktị
Windows 10 -amasị gị na Wi-Fi na kọntaktị
E bụ mgbe a itule ka a hụrụ n'etiti mma na nche, ma ụfọdụ ndị na-eche Microsoft mebiwo ókè ọhụrụ Wi-Fi Sense atụmatụ. The echiche bụ isi bụ na ọ na-enye ihe dị mfe na akpaka ụzọ ịkọrọ gị Wi-Fi paswọọdụ (n'ụzọ zuru ezu ezoro ezo) na kọntaktị sucked si Outlook, Skype, ma ọ bụ Facebook. Ihe bụ nsogbu bụ na i nwere ike na-achọghị iji nye ohere ka gị na netwọk Wi-Fi na onye ọ bụla nke gị na Facebook "enyi".
Gaa Ntọala > Network & Internet > Wi-Fi > Jikwaa Wi-Fi ntọala ma ị nwere ike toggle netwọk na-ekere òkè anya, ma ọ bụ họrọ na-agụnye Outlook, Skype, ma ọ bụ Facebook.
I nwekwara ike ikpebi ma jikọọ netwọk na-akọrọ gị site na kọntaktsị na ebe a, nke dị mkpa, n'ihi na, dị ka Microsoft na-ekwu, "Cheta, ọ bụghị ihe niile Wi-Fi netwọk na-ala. "
Ọ bụrụ na gị nchegbu bụ banyere otu ụlọ ọrụ netwọk, ma ọ bụ onye ọzọ na-ahụ maka netwọk gị bụghị ịpụ, mgbe ahụ, ị ​​nwekwara ike ịgbakwunye ederede "_optout" gị aha netwọk (SSID), ma Microsoft na-ekwu ya nwere ike ọtụtụ ụbọchị maka netwọk gị na-kwukwara na opted-esi ndepụta maka Wi-Fi Sense.
#18 Windows 10 Bluetooth adịghị arụ ọrụ
Windows 10 Bluetooth adịghị arụ ọrụ
Nnọọ ole na ole Windows 10 ọrụ na-enwe nsogbu na-Bluetooth na-arụ ọrụ kwesịrị ekwesị. Nke a nwere ike mmetụta gị keyboard, òké, ekweisi, and anything else that connects to your computer via Bluetooth.
Gaa Ntọala > Ngwaọrụ na-eme ka n'aka na Bluetooth na-toggled on.
Jide n'aka na gị Bluetooth ngwa a n'ụzọ zuru ezu ebubo ma na ị na-eso pairing usoro. Mgbe ụfọdụ, ị ga-jide a button ka ngwaọrụ discoverable. Lelee na emeputa maka nkọwa.
E nwere ihe a ezi uche ohere na nke a bụ ọkwọ ụgbọala nsogbu. Ị ga-achọ iji chọpụta na emeputa na i nwere ọhụrụ ọkwọ ụgbọala, karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-amapụ guzozie si Windows 7 ka 10.
A ole na ole ndị na-akọ na iwepu ọkwọ ụgbọala maka ngwaọrụ ị na-enwe ihe nke na, ịgbanyụ akụrụngwa gị, na mgbe ahụ na-ekwe ka Microsoft na-akpaghị aka na-achọpụta ya ma wụnye ọkwọ ụgbọala ga-eme atọ.
#19 Windows 10 Na ngwa nbipute anaghị azaghachi
Windows 10 Na ngwa nbipute anaghị azaghachi
Ọ bụrụ na, mgbe upgrading, ị na-ahụ na gị na ngwa nbipute na-adịghị na-arụ ọrụ, ị nwere ike na-amalite dum nwụnye usoro n'elu.
Iji hụ na enweghị nkebi Njikọta, ihe niile, ọbụna ndị ọkwọ ụgbọala nke soro ngwaike, ga-emelitere tupu upgrading. Jide n'aka na ị na-eji a na ngwa nbipute na nke ahụ bụ dakọtara na Windows 10.
#20 Windows 10 nwere ike ghara imeghe Windows Store ma ọ bụ enweghị ike ibudata ngwa
Windows 10 nwere ike ghara imeghe Windows Store ma ọ bụ enweghị ike ibudata ngwa
O yiri ka ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-na-agba n'ime nsogbu na Windows Store mgbe emelite ka Windows 10. N'ihi na ụfọdụ ndị ọ ga-emeghe na niile, n'ihi na ndị ọzọ ọ na-egosi na-agaghị ekwe omume n'ezie download ngwa ma ọ bụ ngwa mmelite. E nwere ihe a ohere na-egbu oge ngwa downloads na mmelite a n'ihi ọrụ n'aka sava, ma e nwere ihe ụfọdụ i nwere ike na-agbalị:
Pịa Windows + R na mgbe ahụ pịnye exe na igbe na pịa Tinye. Ọ bụrụ na nke na-adịghị arụ ọrụ wee hichapụ gị download kwụ n'ahịrị na-agbalị ya ọzọ. Ụfọdụ ndị na-akọ na o na-arụ ọrụ maka ha mgbe a ole na ole agbalị.
Ọ bụrụ na ị nwere ike ịnweta Windows Store mgbe niile na ọ pụrụ ịbụ n'ihi na i nwere ndị na-ezighị ezi na mpaghara set. Gaa Ntọala > Oge & asụsụ ma hụ na ị ka ya na mba na ị na-na.
Ọ bụ na-uru na-eme hụ na ọ bụghị ala adabaghị oge ntọala. Were a anya na Ntọala > Oge & asụsụ na-eme n'aka ya niile anya nri.
#21 Windows 10 Edge agaghị enuba music mgbe minimized
Windows 10 Edge agaghị enuba music mgbe minimized
N'ihi na Edge bụ a eluigwe na ala ngwa, ya na omume kwụsịtụrụ mgbe ọ minimized. Nke a bụ n'ezie manụ mgbe ị na-nkwanye music na ya.
E nweghị fix n'ihi na nke a, otú ị nanị nwere enuba gị music si ọzọ isi ma ọ bụrụ na ị chọrọ ige ntị na ya na-eji ngwaọrụ gị maka ihe omume ndị ọzọ.
Ụfọdụ ọrụ Michael Windows 10 na ha mobile ngwaọrụ na-ekwu na touchscreen ikike-adịghị dị ka mmuo ọtọ dị ka ha ga-. Dị ka ọmụmaatụ, ọ dị mfe na-atụ uche na nsọtụ nke a window mgbe na-agbalị ịdọrọ ya, na ụfọdụ ndị ihe oyiyi na-oke obere na ịghọta na mkpịsị aka gị na mpe mpe akwa.
N'ụzọ dị mwute, nke a bụ nnọọ ọdịdị nke anụ ọhịa. E bụ n'ezie na ọ bụghị ọtụtụ ndị ọzọ karịa omume nke ga-enyere gị aka imeri a finicky nsogbu.
#23 Windows 10 Manụ mmapụta gbasie
Windows 10 Manụ mmapụta gbasie
N'ikpeazụ, mmadụ mgbasa ozi ọrụ kọrọ na mgbe na-anwa iji wụnye Windows 10 na ha na-izute a karịsịa mgbakasi ozi. Nke a mmapụta window awade ụfọdụ nke ala aka ndụmọdụ na nke ọ bụla software ụlọ ọrụ mgbe awa ọ bụla nke ya ọrụ. The window na ajụjụ nanị na-ekwu na "ihe mere", na mgbe ahụ nkọwa sara mbara karị na echiche a site n'ikwu na “Ihe mere – Microsoft – Ihe merenụ. "
Kwesịrị ịdị a zutere ọtụtụ ọṅù na meme-e kere eke na-elekọta mmadụ media, ma n'agbanyeghị nke ahụ esemokwu na ntụrụndụ na ọtụtụ ndị ewepụtara njehie a, na omume ya bụ n'ezie a oke nsogbu. Circumnavigating a nke bụ naanị banyere iwepu na reinstalling na software, na ọtụtụ n'ime nke ikpe e nwere ugboro ugboro, nke a doro manụ ozi.
#24 Windows 10 amanye mmelite ike Portal maka junkware
Windows 10 amanye mmelite ike Portal maka junkware
Windows 10 adịghị enye ọrụ a oke mgbe ọ na-abịa usoro mmelite. Ọ na-akpaghị aka na-anabata ha. Na otu aka a na-enyere aka na kọmputa na-aga banyere ya azụmahịa nke emelite ya. Ọ na-ana achi achi na kọmputa bụ ruo ụbọchị na nche patches, ma akpaka mmelite enyere Microsoft ịmanye-eri nri fọrọ nke nta ihe ọ bụla ọ chọrọ jidesie a onye ọrụ PC ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaaka.
E nwere ihe n'ezie fix a, ma ọ bụrụ na ị na-banye Windows 10 Enterprise, Microsoft azụmahịa ngwọta na-ahapụ ọrụ ekwe ka ma ọ bụ agọnahụ mmelite.
#25 Windows 10 bụghị onwe ọ bụla ọzọ
Windows 10 bụghị onwe ọ bụla ọzọ
Nke a abụghị nnọọ a nsogbu, dị ka ọ bụ a nwayọọ ịdọ aka ná ntị. Windows 10 ga-abụ dị ka a free kwalite ma naanị otu afọ. Mgbe na ọ retails maka $119.
A afọ na-ele ka a ogologo oge, ma na ụwa nke technology ọ bụ a ntabi anya, mere adịghị etinye a nweta nkwalite anya maka oke ogologo … dị nnọọ ogologo oge ka mbụ kinks ina ede si.
windo Windows 10 Previous PostSamsung ọzọ Galaxy Smartphone Ga-mara ọkwa August 13Ọzọ Post Caseguru Ngwaahịa Ị hụrụ n'anya, Ga-enweta na Amazon.com! Njikọ Posts
15 Nsogbu na Samsung Galaxy S6 / S6 Edge – Olee otú idozi
Galaxy S6 onu Ígwè Nwoke Limited Edition – Official Unboxing
iPhone 6 Ihuenyo nnọchi mere na 5 nkeji
Samsung Galaxy S3 Glass ihuenyo nnọchi Idozi Change
Njikọ E US
Denye aha anyị Akwụkwọ Akụkọ
Aha Mbụ	Adreesị Ozi Ịntanetị
Copyright 2015 Caseguru Inc | Ikike niile echekwabara
Pin Ọ Share